Zvishongo | Trivoshop
Kufambisa / Mota Stereos
Mag chiwanikwa mavhiri
Exercise & Kugwinya
Pamhepo Fashoni Zvishongo Zvishongo
Pamhepo mafashoni ezvishongo zvitoro zvinowanzo kukuremedza nesarudzo dzinogona kuguma nekuzvidemba kwemutengi mushure mechinguva. Trivo Shop yakafunga kutenderedza matafura panguva ino asi kwete kungo chengeta yavo yakaunganidzwa neyezvazvino fashoni zvishongo asi zvakare nekuisa iwo chaiwo maratidziro anoenderana nezvakatemerwa kuitira kuti iyo yakanyanyisa kuwanda isazombodzora kutonga kwako zvakare.
Trivo Shop yakazvisimbisa seimwe yeakanakisa epamhepo mafashoni ezvishongo zvitoro iwe aunogona kusangana nawo nekutarisira kune zvaunoda uye kutora izvo zvinopihwa chaizvo kuti uve nechokwadi chekuti hauzomborasikirwa neazvino matsva mafashoni ezvishongo. Zvishongo zvinouya mune ese maumbirwo & hukuru, uye apa ndipo panowana zvinhu zvinonakidza sekushomeka mumhando dzakasiyana dzemaketani, mhete, mitsipa, zvishongo, nezvimwe.
Yakachipa Fashoni Zvishongo Pamhepo
Zvishongo nezvishongo kazhinji zvine mutengo unorema wemutengo uyo unoruramisa poindi yemutengo kana zvasvika kune mhando yekuvaka uye kunyanya izvo zvinhu zviri kushandiswa kugadzira ichi chidimbu chehunyanzvi. Asi iwe ungaziva sei kana iri iyo yakanakisa kukosha kune yako buck? Apa ndipo patinopindamo apo patinoona kukosha kwekuti zvishongo zvemafashoni zvinokubata uye tozvifananidza nemusika kuti upe iyo inodhura mitengo uye kazhinji pamitengo inonzwisisika kana ichienzaniswa nevamwe vayo mumusika.
Yedu heshe inoumbwa neye anklet kuunganidzwa iyo inosanganisira Fancy, Figaro, Mariner, uye Singapore anklets pamwe chete needu akasarudzika mabhandi akaita seMiami Cuban, Figaro, uye Sea Life zvishongo izvo zvakakosha kuongorora. Asi izvi hazvisi zvese sezvo isu zvakare tichiisa yakafararira marangi emabhengi ayo anotangira kubva kune echinyakare kusvika kune anodakadza mabhengi, kusanganisira akajairwa akasungirirwa iwo.
Trivo Shop inopa yemafashoni zvishongo zvehupenyu hwese neayo akasarudzika huwandu hwezvigadzirwa zvinosungirwa kufadza!
Mutengo: Kuderera kusvika kuHotori
Mutengo: Kumusoro kusvika kuChotera
Akwegura kusvika KuNewest
Kuti isati yakwegura